काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थपियो | Samajik Khabar
Home मुख्य काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थपियो
काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थपियो
काठमाण्डाै : काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थपिएको छ । काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ ३ गतेदेखि शुरु भएको निषेधाज्ञा आज राति सकिँदै थियो । काठमाण्डौ उपत्यकामा कोरोना सङक्रमण बढ्दै गएकाले एक हप्ता थप गर्ने निर्णय भएको हो । निषेधाज्ञा अब भदौ १७ गते बुधबार रातिसम्म लम्बिएको छ ।
यसअघि काठमाण्डौ उपत्यका मेयर फोरमले कोरोना सङक्रमण जोखिम कायमै रहेको भन्दै एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्न सिफारिस गरेको थियो । निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि रोकिएका छन् ।
काठमाण्डौ उपत्यका भित्र गाडी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका सहित ५० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ ।
निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाईंदैन ?
निषेधाज्ञाको बेला औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदको कामबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट निस्किन नपाउने गरी यसअघि नै १७ बुँदे निर्णय भैसकेको छ ।
जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक गाडीसमेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कोभिड –१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन र जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको तस्वीरसहितको परिचयपत्रका आधारमा आवागमन गर्न पाउने छन् । त्यसबाहेकका अरु गाडी सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
Previous articleकुलमानलाई पुन: नियुक्ती नगर्दा समर्थकले सरकार ढालिदिए भने आश्चर्यचकित नहुदा हुन्छ
Next article१ हजारमा कुरा नमिल्दा ५५ स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक राजीनामा